विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएको उपप्राध्यापक बर्खास्त « Drishti News – Nepalese News Portal
विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएको उपप्राध्यापक बर्खास्त
२२ असार २०७८, मंगलबार ७ : ४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । परीक्षामा सामेल नै नभएका विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएर पास गराएको आरोपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङतर्फको स्नातकोत्तर कार्यक्रमका निर्देशक एवम् उपप्राध्यापक विश्वनाथ यादवलाई बर्खास्त गरेको छ ।
उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहका अनुसार परीक्षामा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले यादवलाई दोषी देखाएपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । ‘अक्षम्य शैक्षिक अपराध गरेकाले सेवाबाट बर्खास्त गरेको हुँ’, उपकुलपति सिंहले भने ।
विद्यार्थीहरुले यादवले मनलाग्दी रुपमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनतर्फ विषय शिक्षकले पठाएको नम्बर लुकाएर नम्बर दिएको उजुरी गरेका थिए । दीपबहादुर रावलको नेतृत्वमा त्यस विषयमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठित समितिले अक्षम्य अपराध गरेकाले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कन्सट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुने गर्दछ । स्ट्रकचरल इन्जिनियरिङ विषयको अन्तिम परीक्षाको प्रयोगात्मकमा आफूखुसी नम्बर दिएको पाइएको छानविन समितिको ठहर छ । प्रयोगात्मक परीक्षा ४० नम्बरको हुन्छ ।
सो परीक्षामा १३ जना विद्यार्थीहरुलाई ४० मा ४० नम्बर दिएको पाइएको छ । यसैगरी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका चार वटै विषयमा विद्यार्थीहरुलाई ३४ देखि ३७ नम्बरको दरले समान नम्बर दिइएको छ ।
परीक्षामा अनियमितता गरेको भनेर गल्तीसमेत स्वीकारेकाले कारबाही गरिएको उपकुलपति सिंह बताउँछन् । उनले भने, ‘मबाट गल्ती भयो, माफ पाउँ भनेका छन्, तर मैले माफ दिन सक्दिनँ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न आएको हुँ, सुधार गरेरै छाड्छु ।’